Rio de Janeiro - I LOVE RIO- RIVER UHULUMENI
Rio de Janeiro Isimo
Eqaphela ukubaluleka kanye ubuhlobo synergic phakathi dolobha kunenqwaba yamadolobha que ithe State, I LOVE Rio Inikeza imininingwane iso-kokuvula mayelana imizi, izifunda kanye que imiphakathi amanga ngaphandle kwenhloko-dolobha odumile we State.
Zonke ematsheni kanye amakhona State zibhekiwe ekuphishekeleni kufihlwe amasiko, social and gastronomic amagugu. The Iwebhusayithi ihlola ekuthuthukiseni zomlando kanye namathafa amahle zabaningi izifunda esiyingqayizivele, embula indima ebalulekile ngamunye nemidlalo in the que Indwangu jikelele we State.
Colonial UMLANDO KANYE Nemvelo umbukwane
Ngenxa ithelevishini, amabhayisikobho, futhi travel omagazini izihambi eziningi usunawo umbono walokho emzini edumile emhlabeni of Rio de Mayelana January: kwesithombe awubufakazi UKhrestu has Kube omunye izethulo yisakhiwo sodumo kakhulu noma Rio futhi Brazil for Cishe Ngekhulu. Samba, soccer, emabhishi, futhi zomkhosi imikhosi Rio BakaJehova banesizathu Yaba the medium amashumi eminyaka.
Beyond yini isivele odumile, kukhona okuningi bazi futhi nakho ezindaweni ezizungezile - esifundeni namanje que nhlobo ngaphandle Brazil. Rio, umuzi ngokuvamile the Okukhulunywa, Itholakala State ngegama elifanayo, uMbuso of Rio January - uyikhaya ingcebo sezakhiwo yemvelo kanye namasiko, emabhishi amahle, izintaba, futhi green imvelo
Kukhona 26 ithi federal eBrazil, 27 isiyonke kanye esifundeni federal enhlokodolobha wezwe Brasilia. The State Rio de Janeiro is izungezwe sithi of Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, kanti by the ngokuqhafaza kanye.
Azungezile enhlokodolobha, esifundeni uMbuso ngamunye Rio de Janeiro iwukuba ezihlukahlukene izindawo Inhliziyo enkulu ekhaya futhi nesithakazelo namasiko. Nakuba abanye ezifundeni ukuze yokuzamazama ekhaya Iziqhingi namabhishi secret, ezinye izifunda sikhangise leminyaka ubudala amasiko kanye izakhiwo zamakoloni. Ezinye izingxenye State kukhona okusezingeni ezintabeni noma izungezwe emahlathini, futhi ngenkathi bonke ezahlukene, zonke izifunda ngo State ukunikela Brazilian abunaphutha izihambi.
Isimo Rio de Janeiro uhlukene eziyisishiyagalombili izifunda - Região Metropolitana, Região Serrana, Região Norte Fluminense, Região Sul Fluminense, Região Noroeste Fluminense, Região das Baixadas Litorâneas, Região Medio Paraíba, futhi langa Região Costa Verde.
Akhiwe Região Metropolitana, laseNiterói uhlezi the Guanabara Bay nje ngaphesheya Rio de Janeiro umuzi ibanga ka-10 amakhilomitha phakathi ezimbili. LaseNiterói siyikhaya a ocebile ezihlukahlukene ezikhangayo engokwesiko, ezinye zazo ngempela umbukwane, kufinyeleleke kalula kusukela Rio de Janeiro emzini futhi akufanele ezingabanjwanga. Eyasungulwa araribóia, induna Tupi-Guarani ababesiza IsiPutukezi ukuxosha abahlaseli French, kuba umuzi kuphela waseBrazil ukuba asesunguliwe by an umholi zomdabu.
Ngaphezu kwalokho kude Rio de Janeiro emzini, ezifundeni kunabo izivakashi isithakazelo the State kukhona isiqhingi-rich Costa Verde (coast green), the Região das Baixadas Litorâneas, eyaziwa nangokuthi Costa do Sol (ogwini ilanga) ekhaya emabhishi namachibi, kanye Região Serrana (kwezifunda zezintaba) emaqaqasini the State, ekhaya emagqumeni green, izintaba, amathafa namahlathi.
Igama Costa Verde ubonisa rainforests zawo zaziziningi ngenkathi Costa do Sol laqanjwa kanjalo ngenxa eziningi emabhishi-class emhlabeni esifundeni. Ugu oluhlaza izindawo eyingqopha ezifana ekhaya Ilha Grande, Paraty, futhi Angra dos Reis, oluhle emvelweni amapaki kahulumeni ezifana Parque Nacional da Serra da Bocaina. The Costa Verde ubonisa izakhi eziningi ubuhle bemvelo LwaseBrazil ekhanya kuyaphikisana, kokuba ngakolunye uhlangothi olwandle kanye ngqo ezibhekene it, ezintabeni emangalisayo aluhlaza anamahlathi.
Angra dos Reis idume emabhishi alo amahle futhi iziqhingi eziningi lapho pepper amanzi crystal, esukela eyihlane beach idylls ezindaweni eyinkimbinkimbi yentuthuko. Abaningi odumile futhi kugujwa lawo Ilha Grande, noma 'isiqhingi enkulu', lapho emabhishi olunothile ukuhlangabezana aluhlaza ehlathini Atlantic nemishayo ukuphumula, zokudlela nezindawo zokudla. Izivakashi zijabulela isikebhe kanye yacht uhambo emhlabeni esifundeni futhi bagcine ezihlukahlukene zezinto eziphila emanzini. In Angra dos Reis uqobo ezikhangayo zihlanganisa isikhungo somlando, izindlu zamakoloni, convents, amabandla futhi zokudlela ebukekayo.
Zixaka edolobheni colonial of Paraty kuyisikhathi-travel isipiliyoni: with eminyakeni engu-400 yomlando futhi izakhiwo amahle elisendaweni ezitaladini zalo cobbled, kuba ezinye acwebile kakhulu ekhaya namabhishi enhle kule State, kuhlanganise Trindade Beach and Sono Beach with crystal emanzini acwebile ekahle ukubhukuda kanye snorkeling. Lapho kukhona futhi Izimpophoma esimnandi kude elincane edolobheni main.
Costa do Sol, kanye amakhilomitha yayo phezu 100 emabhishi, yaziwa nangokuthi Região dos Lagos, noma esifundeni amachibi, emva amachibi amaningi futhi amachweba bathola khona. Lapha, esinokuthula Cabo Frio, lo Arraial ngasese do Cabo, lo Búzios phakade Chic, futhi Surfing capital Brazil sika Saquarema kukhona nje ezinye eziningi izindawo ezinkulu kokunikela emabhishi lokukwazi, vistas olunothile, futhi nightspots fantastic.
Njengoba zibizwa ngokuthi ama capital brazil sika Surf, Saquarema imayelana Km 100 kusukela Rio de Janeiro. Lokhu isifunda ekuqaleni kuhlale zendabuko Tamoio izizwe abadobi, ngubani ezikhethekileko mollusk, easy ukuthola ngenxa geography yalesi elisogwini. Lapha, kukhona 60km ugu ukuhlola, namabhishi 12 ukuze surfing abathanda ukuba khetha kusuka.
Araruama edolobheni ngobukhulu Região dos Lagos, ekhaya kwezentengiselwano onohlonze indima wanda empilweni the State, kanye famoust araruama lake, a ekahle Lagoon for windsurfing. Futhi in Araruama iyona beuatiful futhi namanje secret Praia seca, a ende emhlophe-sand beach ethandwa kakhulu kunanini ngaphambili phakathi kwalabo abajabulela ezibalulwa kanjena ngokufanele, emabhishi yemvelo futhi namanje ongafuni ukuhlala esondelene eRio de Janeiro emzini.
Cabo Frio, elise emhlabeni amahora amabili kusukela Rio de Janeiro umuzi, idume ocean yayo emabhishi, esimhlophe zesihlabathi kanye ngokomlando okuphawulekayo Fort 'Forte de São Matheus.' It has a popular iqembu leziqhingi kulabo bayengwa curiosities kanye izintelezi of amancane ukudoba lapho omunye ungakwazi ukuthenga kwaziswa okumnandi kwasolwandle, kanye ukuhlanganyela kahle-wayemthanda esidlule-time of amateur noma ukudoba professional. Cabo Frio ingenye lamadolobha abaluleke kakhulu futhi ngoba beach fashion kule lizwe.
Rio das Ostras inama elula eside ahlanzekile, nokuzola ugu, sakhiwe 15 emabhishi enchanting, ekahle Surfers. Izivakashi ukujabulela eziningi kangaka imigoqo, zokudlela kanye zinsiza lapho anikele okumnandi cuisine endawo kanye amachweba, amapaki kanye reserves ukuthi abacebile zezilwane nezimila. Umuzi uthola lodumo wonyaka jazz festival.
Arraial do Cabo inikeza ezinye the arcade diving amabala e Brazil inala dive izikebhe kusale emabhishi ekahle waqondisa underwater ukudoba ezamehlela surf. The Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Extractive Marine Reserve of Arraial do Cabo) is a indawo emvelweni ezikwenza esifundeni, elinezindawo ukudoba bendabuko imiphakathi.
Yaduma kusukela ngawo-70 by actress French Brigitte Bardot, a hotspot uyisidingo ukuvakashelwa lokudlala for the kahle-heeled yilona lodumo Armação dos Búzios, ngokujwayelekile ngokuthi nje 'Búzios.' With amabhishi amahle nightlife enkulu lena imfashini ebhishi elisedolobheni of the day, edonsa a nezinto eziningi Cariocas and international izivakashi ugu ngendlela ebabazekayo. The engakunaki nokubhuza and nightlife nenhle inama ahlukahlukene eclectic imigoqo, zokudlela nemishiza nokwenza Búzios indawo ekahle a ukubaleka bubuhle.
Macaé ingenye ezifundeni ezicebile kakhulu Rio de Janeiro, kokuthola ezingeni lelisetulu ibhizinisi ezokuvakasha ngenxa Imboni yayo kwezilwandle kawoyela. It isingathe biennial Brazil Offshore conference for uwoyela negesi okuletha ndawonye emhlabeni 800 umbukiso. Umuzi Ubuye izindawo obukhulu bemvelo, kuhlanganise emabhishi, zokulondolozwa, iziqhingi, amachweba ezisogwini, izintaba, nezimpophoma zokulondoloza imvelo.
Região Serrana, indawo enezintaba ekhaya umuzi ngokomlando ebalulekile Petrópolis, ngesinye isikhathi capital of Brazil, kanye ebukekayo Nova Friburgo. The Região Serrana okunikezwayo izihambi, angaboni ukuphakama ezintabeni Serra dos Órgãos, futhi ngenxa isimo sezulu sipholile ngokulinganisela, le ndawo budonsa izivakashi eziningi unyaka wonke.
Petrópolis, omunye ethandwa kakhulu futhi emangalisa izindawo SaseRio State, futhi endearingly kubhekiselwa kuso ngokuthi the 'Imperial City' ngoba nkosi Dom Pedro II ekhaya lakhe. It is zizungezwe aluhlaza Atlantic Forest and pulses kanye art, umculo, dance, isiko kanye isiko.
ETeresópolis sakhonza, esenkabeni phezu kwentaba omangalisayo uhla, evame for fresh, air awo epholile futhi enhle engokwemvelo amapaki, igcwele ezihlukahlukene flora, nezilwane neziphethu. A izikebhe sweet, izingubo okuningiliziwe emakethe futhi owenzeka njalo ngempelasonto.
Nova Friburgo, nokuntula Atlantic Forest, izipesheli uhla izinkambo Treks ukuzwa izimpophoma, izintaba, imifula futhi alondoloza kwemvelo. Ikona alithanda kahle for izinga layo okusezingeni pousadas, zokudlela okuningiliziwe - kubandakanya fondues and raclettes, bezimbuzi ushizi, cookies kanye ushokoledi okuzenzela.
Cachoeiras de Macacu ibizwa ngokuthi yokudumisa eziningi Izimpophoma amahle (cachoeiras) esifundeni, futhi wathola idolobha the isihloko 'impilo-resort edolobheni.' Le ndawo eyingqayizivele Itholakala Região Serrana, esingaphansi 90km ukusuka enhlokodolobha. A town ngezwi 'Izimpophoma' egameni layo ikukhumbuza futhi emizweni ukuthula kanye ukuzola.
Akhiwe 'esigodini ikhofi', the ivumelane entabeni edolobheni Miguel Pereira uhlezi endaweni engamamitha 618m, futhi lizungezwe izintaba aluhlaza elingaphakathi eBrazil. Miguel Pereira has a olinganiselayo futhi high oxygen level, wasinikeza a elimangalisayo isimo sezulu unyaka wonke. Yaziwa sezulu yayo luscious, leli dolobha azikutholi resort sezulu, kanye usubhekwa ngokusemthethweni njengoba 3 sezulu arcade in the world, the arcade 2nd in Brazil, futhi the arcade in the State of Rio de Janeiro.
Kuwo Rio de Janeiro, mata amahlathi Atlantica ezishisayo kanye sub-tropical kuthiwa agcwele biodiversity. Zinhlobo Its ummeleli izimila nezilwane zinhlobo ukwenza Região Serrana omunye ezihlukahlukene kakhulu kule planethi.
Ngokuba labo abeza Rio de Janeiro futhi ufuna ukuzwa side eyengeziwe esifundeni, ziningi eseduze izindawo ukunikela eziningi ezihehayo futhi efinyeleleka kalula for a tour wosuku olulodwa noma ngesonto-ekupheleni.
Izindawo eyaziwa Less ezifana Rio das Ostras futhi izimpophoma of Cachoeiras de Macacu kukhona izindawo emangalisayo ukuvakashela futhi beba more and more lidumile kokubili Brazilian kanye izivakashi international ngokufanayo.
Imboni yezokuvakasha Rio sika njalo namatemu kuyisici esibaluleke yentuthuko kahulumeni ethelayo futhi esimeme. Kukhona nabaningi izinkampani abazinikezele ukuhamba emhlabeni State, ezinye zazo zinikeza hambo entsha, kanti abanye ukugxila Nemvelo and imfundo kwemvelo noma high-ekupheleni beach Ukumnaka. Ukuqinisekisa ukuthi imboni izivakashi imisebenzi ngendlela co-operative nangokushesha, izikhungo eziningi zomphakathi ukwengamela ingqalasizinda ibhizinisi kubalulekile lula ukuxhumana phakathi amabhizinisi kanye nokugqugquzela exposure.
I LOVE Rio ligcizelela ubuciko, impucuko futhi izivakashi emizini eminingi yonkana Rio de Janeiro, evula umnyango amathuba amasha futhi othakazelisayo travel.
Izindawo eyingqopha ezifana Paraty futhi Ilha Grande kukhona contra ebuzwe amagugu afihliweyo ezifana Cachoeiras de Macacu. Ezenye jewels zihlanganisa imfashini beach edolobheni Búzios, bachuma futhi kwezomnotho umuzi eliphawulekayo Macaé, izimpophoma, izintaba, nemihosha reserves kwezemvelo Nova Friburgo, kanye fresh, cool air namapaki ebabazekayo zemvelo of eTeresópolis sakhonza.